अमेरिकामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक एक लाख हुन सक्ने - १७ असार २०७७, NepalTimes
अमेरिकामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक एक लाख हुन सक्ने
१७ असार, एजेन्सी ।
अमेरिकी वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले अमेरिकाका कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक एक लाख हुन सक्ने बताएका छन् ।
सिनेटमा भएको सुनुवाईको क्रममा डा. फाउचीले दैनिक संक्रमितको संख्या एक लाख पुगेमा आफू आश्चर्यमा नपर्ने बताएका हुन् । सिनेटमा बयानको क्रममा डा. फाउचीले भनेका छन्, ‘स्पष्ट छ कि हामी अहिले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनौँ ।’
अमेरिकीहरुले मास्क लगाउने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता संक्रमणबाट जोगिने उपायहरु अझै पनि प्रभावकारी रुपमा नअपनाउँदा समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको डा. फाउचीको भनाई छ । सुनुवाईको क्रममा फाउचीले अहिले अमेरिकामा दैनिक संक्रमण हुने मध्ये आधा चार राज्यका नागरिक रहेको बताए ।
त्यसअघि न्यूर्योकका गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोले अरु राज्यबाट आउने आधा अमेरिकी आइसोलेशनमा बस्नु पर्ने बताएका थिए । अमेरिकामा मंगलबार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४० हजार भन्दा बढी रह्यो । पछिल्लो पाँच दिनमा चार दिन संक्रमितको संख्या ४० हजार भन्दा बढी रहेको छ ।
अहिले विशेष गरी अमेरिकाको दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यमा संक्रमण अति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। डा. फाउचीले सिनेट सुनुवाईको क्रममा उल्लेख गरेका बढी प्रभावित चार राज्य फ्लोरिडा, एरिजोना, टेक्सास र क्यालिफोर्निया रहेको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ ।